Alexa Mansour dia niditra tamin'ny mpilalao Home Before Dark | Avy amin'ny mac aho
Rehefa vanim-potoana faharoa amin'ny andiany Trano alohan'ny maizina efa hanomboka amin'ny premiere amin'ny Apple TV +, ny 11 Jona ho avy izao, avy amin'ny fe-potoana farany, nilaza izy ireo fa mpilalao amin'ity andiany tanora ity ho an'ny mpihaino rehetra nitarina niaraka tamin'ny mpilalao sarimihetsika Alexa Mansour, mpilalao sarimihetsika fantatra amin'ny famonoana ny The Walking Dead.
Araka ny hitantsika ao amin'ny rakitra IMDB azy, mbola tsy naseho tamin'ny mpilalao tamin'ity vanim-potoana faharoa ity ilay mpilalao sarimihetsika mandra-pahatongan'ny vanim-potoana fahatelo amin'ilay andiany rehefa milalao ny andraikitry ny Emma Hathaway, mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa izay tena gaga tamin'i Izzi (Kylie Rogers) sy izay sakaizany.
Andro vitsy lasa izay, Apple dia namoaka tao amin'ny fantsona YouTube ny tranofiara voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa, vanim-potoana izay miverina manana ny maha-izy azy voalohany amin'ny andiany toa an'i Brooklyn Prince tahaka ilay mpanao gazety tanora Hilde sy Jim Sturgess ho rain'ilay mpiady. Ny fizarana faharoa dia hanasongadinana ihany koa Kylie Rogers, Joelle Carter, Aziza Scott, ary Abby Miller ankoatry ny hafa.
Amin'ity vanim-potoana faharoa ity dia manomboka amin'ny a fipoahana miafina amin'ny toeram-piompiana eo an-toerana. Hilde, ilay mpanao gazety tanora, dia manomboka ny fanadihadiany izay hitarika azy any amin'ny orinasa matanjaka sy manan-kery izay hanimba ny ain'ny fianakaviany sy ny an'ny tanàna onenan'izy ireo, Erie Harbour.
Ny vanim-potoana voalohany an'ny Home Before Dark premiered manontolo tamin'ny aprily 2020Eo afovoan'ny areti-mandringana anefa, ny drafitr'i Apple amin'ity vanim-potoana faharoa ity dia ny premiere isan-kerinandro ary fizarana vaovao, manaraka ny kalandrie izay mamela azy hampiditra lohateny vaovao amin'ny sehatra video streaming.
Amin'ny volana ho avy dia efa nandahatra i Apple mamoaka atiny vaovao be dia be, Ka hanana fahavaratra mahafinaritra isika, na amin'ny andiany na amin'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny Apple TV +.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Alexa Mansour dia niditra tamin'ny mpilalao Home Before Dark